Masinina mameno, Masinina fanoratana, Masinina fanidiana - Lianteng
FAMARIHANA 10 taona
Mampanantena mafy izahay fa ny tsy fahombiazan'ny vokatray dia maimaimpoana ao anatin'ny 10 taona
Mifantina fitaovana avo lenta izahay, vokatra amin'ny alàlan'ny fizotrany maro, fanandramana miverimberina
Wenzhou Lianteng fonosana milina Co.Ltd. dia nanolo-tena ho amin'ny fampandrosoana, famokarana sy ny varotra fitaovana fonosana fonosana, dia matihanina an-trano mirotsaka amin'ny sakafo, fanafody sy ny fonosana automated fonosana mandeha ho azy orinasa mandroso. Lian Teng hanome anao ny famolavolana, ny fanamboarana, ny fametrahana, ny fanendrena, ny fiofanana, serivisy aorian'ny fivarotana, toy ny serivisy amin'ny alàlan'ny lamasinina. Lian teng dia nivoatra ho famolavolana, famokarana, varotra, fikarohana ary fampandrosoana amin'ny iray amin'ireo orinasa maoderina avo lenta.
Fillin ranon-tsipika mahitsy ...
G2WG Double head Mametaka ...
G1WY lohan-drakitra feno ranon-javatra ...
G1WG loha iray Mametaka ...
A03 Famenoana tsindry tanana ...
LT-60 Masinina fanamarihana fisaka
LT-50D boribory tavoahangy labelin ...
Famaritana tavoahangy boribory LT-50 ...
Inona ilay masinina famenoana Ny milina famenoana dia sokajy kely indrindra amin'ny vokatra ao amin'ny milina famonosana. Raha ny fahitana ny fonosana ara-materialy dia azo zaraina ho famenoana ranon-javatra ...
Ny vokatra amidy indrindra amin'ny taona 2020 - ny milina famenoana Lianteng fonosana dia nanolo-tena tamin'ny fampandrosoana, famokarana ary fivarotana fitaovan'ny milina fonosana, dia pro ...
Lianteng dia manofana ny kolontsain'ny orinasa ho an'ny mpiasa hatramin'ny nananganana azy folo taona lasa izay, ny milina famonosana Lianteng dia tsy nifantoka tamin'ny fampivoarana sy famokarana packa isan-karazany ...